कला / साहित्य – Page 8 – Nepal Parikrama
दिपेन गुरुङको दोस्रो एल्वम प्रतिक बजारमा
काठमाडौं । गायक दिपेन गुरुङको गीती एल्वम ‘प्रतिक’को राजधानीमा एक समारोहमा विमोचन भएको छ । गायक गरुङको यो दोस्रो एल्वम हो । विमोचन समारोहमा प्रमुख अतिथि गायक नविन भट्टराईले गुरुङको प्रतिक एल्वम गथीत क्षेत्रकै प्रतिकको रुपमा बजारमा आएको चर्चा गर्नु भयो । कार्यक्रममा गायक भुवन सुप्तिहाङ राई लगायत बक्ताले उनका गीति एल्वम प्रतिक बारे चर्चा गरेका थिए । एल्वम सार्वजनिक लगतै प्रतिक एल्वमको प्रमोसनको लागि
काठमाडौं–बैशाख । प्रतिभालाई कुनैपनि कुराले छेक्दैन भन्ने एउटा गतिलो उदाहरण हुन, जिग्मे छ्योकी घिसिङ । वि.सं.२०६५ साल मंसिर १५ गते माता बसन्ती लामा र पिता रामकाजी घिसिङको पहिलो सन्तानका रुपमा जिग्मे छ्योकीको जन्म भएको हो । काठमाडौंको भगवानपाउमै जन्मिएकी यी ७ बर्षिय प्रतिभा आफ्नो स्थायी घर दोलखा दुधपोखरी पुगेकी छैनन । स्वयम्भु भगवानपाउ–१५ मा रहेको अरुणोदया एकेडेमीमा कक्षा ४ मा अध्ययनरत जिग्मे छ्योकी
आइतबार दिनको ३ बजे अरुणोदया एकेडेमी जाऔँ, बालप्रतिभा जिग्मे छ्योकीसँग रमाऔँ
काठमाडौं–बैशाख १८ । संगीतका पारखीहरुले बारम्बार सुन्ने सयौं कर्णप्रीय गीतहरु मध्येको एउटा गीत होे “तिम्ले बाटो फेरेउ अरे” बोलका गीत । यसमा पनि किड् भर्सनमा रहेको गीत संगीतप्रेमिको पहिलो रोजाईमा छ । सार्वजनिक सञ्जालमा भइरल बनेको यो गीत अहिले युवायुवती, बुढापाका सबैले गुन्गुनाउछन पनि । लाखौं संगीतप्रेमिले मन पराएको यो गीत गाउने गायीका भेट्ने रहर संगीतका पारखी जो कोहीमा हुनसक्छ, यो स्वभाविक पनि हो
‘गाजलु’को ट्रेलर सार्वजनिक
काठमाडौं–बैशाख । चलचित्र ‘गाजलु’को ट्रेलर रिलिज भएको छ । रोहित अधिकारीद्धारा निर्मित यो चलचित्रको गीत र फस्टलुक भने यस अघि नै सार्वजनिक भैसकेको थियो । यो चलचित्र रिलिजका लागि जेठ २८ गतेको समय तय भएको छ । नायक अनमोल केसी र पूर्व मिस नेपाल श्रृष्टी श्रेष्ठको केमेष्ट्रीका कारण यो चलचित्र दर्शकको प्रतिक्षा बनेको छ । निर्देशक हेमराज वीसी र नायक अनमोल केसी तेश्रो पटक एउटै प्रोजेक्टमा देखापरेका छन् । स
रामप्यारीका लागि रेखाको दौडधूप, राजेशसँगै रेखाले तताइन् स्टेज
काठमाडौं । नायिक तथा निर्देशक रेखा थापा अहिले आफ्नो पछिल्लो फिल्म रामप्यारीको प्रमोशनमा जुटेकी छन् । कुनै सामाजिक कार्य होस् या सांस्कृतिक कार्यक्रम उनले भनेकै हुनेकै हुन्छिन्–‘रामप्यारी हेरिदिनुपर्‍यो ।’ हालै काठमाडौंमा भएको एउटका कार्यक्रममा जब, गायक राजेश पायल राई स्टजमा पुगे, उनले नायिका रेखा थापालाई पनि बोलाए । रेखा पनि स्टेजमा पुगिन् । ‘हामी उठ्ने छौ’ले आयोजना गरेको खेलाडी सम्मान कार्यक्रमम
काठमाडौं, चैत्र २३ । बालबालिकाका लागि उपयोगी खुराकका रुपमा संकलन गरिएका उत्कृष्ट बालकथाहरु समेटिएको कृति ‘उत्कृष्ट बालकथा सङ्ग्रह–१’ बजारमा आएको छ । ट्रिनिटी प्रकाशन प्रालि काठमाडौंले प्रकाशन गरेको उक्त सङ्ग्रहभित्र बालकथाकार अमर न्यौपानेको ‘पाहुना, शान्ता गौतमको ‘मुस्लेभूत र ममता’, गोपीकृष्ण ढुंगानाको ‘सानो पत्रकार’, शुषमा मानन्धरको ‘फाटेको जुत्ता’, जितेन्द्र रसिकको ‘पेन्सिलको अदालत’, हरिहर तिम
माधवले यो माया तिमै हो भने सम्पदालाई….
काठमाडौ–चैत २३ । केही बर्षदेखि विभिन्न टेलिचलचित्र, नाटकमा अभिनय गदै आएका माधव त्रिपाठी यो माया तिमै हो भन्दै मोडल सम्पदा बनियाँ संग एक नयाँ म्युजिक भिडियो मार्फत रंगमञ्चमा देखिएका छन् । केही दिन अघि मात्र राजधानीका विभिन्न रमणीय स्थानमा खचिएको यस भिडियो मार्फत माधव रंगमञ्चमा आफूलाई उभ्याउन लागि परेका ह्ुन् । गायक कमलमान सिंहको यो माया तिम्रै हो को रिमेक गीतबाट उनले मोडलिङमा डेव्यु गरेका हुन् । ए
पृथक कथा सहितको नयाँ चलचित्रको तयारी गर्दैछु: निर्मात्री श्रेष्ठ
४ वटा चलचित्र बनाएर नेपाली सिने क्षेत्रका चर्चामा आएकी निर्मात्री कविता श्रेष्ठले आफु नयाँ खालको चलचित्र बनाउन तयारिमा रहेको खुलासा गरेकी छन् ।चेलिबेटी वेचविखनको कथामा आधारित चलचित्र ‘ढुवानी’लाई देशभर प्रदर्शनको नि:शुल्क अधिकार माइती नेपाललाई दिएकी निर्मात्री श्रेष्ठले नेपाली चलचित्रमा फरक आयाम थप्ने बताएकी छन् । ‘ढुवानी’ माइती नेपालको संजाल पुगेका ४५ वटा जिल्लाका दर्शकसम्मपुग्नेछ । उनले बनाएका
मनको शान्ति मुक्तक संग्रह विमोचिन
काठमाडौं–चैत १२ । मोह श्रेष्ठ “स्पात” को दोस्रो कृतिका रूपमा “मनको शान्ति” मुक्तक संग्रह विमोचन भएको छ । मुक्तक सङग्रको नेपालका लागि भारतीय राजदुत रञ्जित राय र प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषद्, नेपालका राष्ट्रिय अध्यक्ष डा. रामजी गौतमले सयूक्त रूपमा गर्नुभएको हो । विमोचनमा कार्यक्रममा संविधानविद् भिमार्जुन आचार्य, राजनीतिक विश्लेशक तथा स्तम्भकार अनिरूद्ध गौतम, वरिष्ठ कलाकार नीर शाह लगाएतका राष्ट्रिय
लोक गायक सुरजको आचार्यको आमा एल्बम् बजारमा
चैत । लोक गायक सुरजको आचार्यको आमा एल्बम बजारमा आएको छ । विगत केही बर्षदेखि लोक साँगितिक क्षेत्रमा क्रियाशिल तथा संघर्षरत गायक सुरज आचार्यको अघिल्ला केही गीतको सफलता पछि आमा गीत बजारमा आएको हो । गीतमा जन्म दिने आमा प्रति सम्मान भाव राख्ने शब्दहरु समेटिएको छ । ‘‘दश धारा आमाको दुधको मुल्य सायदै केहि संग तुलना गर्न सकिन्न । आमाको सन्तान प्रतिको माया अनि बुढेसकालको लाठि छोराहरुले आमाका निमित्त गर्न स